Fatapahan-drano : Tsy manana vahaolana ny JIRAMA -
AccueilSongandinaFatapahan-drano : Tsy manana vahaolana ny JIRAMA
Noho ny fahatsentsenan’ny fantsona mitarika ny rano eny amin’ ny toerana avo no anton’ ny fatapahan-drano isan’andro amin’ ireo toerana ambony eto an-drenivohitra, raha ny fanazavana nentin’ ny minisitry ny Angovo omaly. Mahaloa vola ara-dalàna anefa ireo mpanjifa rano amin’ ny JIRAMA mipetraka eny amin’ ireo toerana ambony ireo, nefa dia valy boraingina no nasetrin’ny minisitra ireo vahoaka tapaka rano, saika isan’andro tao anatin’ ny roapolo andro teo ho eo izay. Raha simba ny fantsona, inona no tsy hanamboarana azy fa tsy manao tsinontsinona olona sy mitady paika hialana bala amin’ izay fahatsetsenan’ny fantsona any. Tsy mba rea akory hoe mitady vaha-olana ny tompon’andraikitra , fa dia mbola fanakiviana ihany no lazaina ny vahoaka hoe any ambany tany any lay fatapahana dia miandry fitaovana.Tsy fantatr’ingahy minisitry sy ny talen’ny JIRAMA angamba fa aina ny rano, ary manapaka aina izy ireo manapaka ny rano izay mitovy amin’ ny famonoana ny Malagasy mitovy aminy ihany izao tsy fandraisana andraikitra izao. Sakafo ho an’ ny mpianatra sy ny mpiasa mandeha maraina, miankina amin’ ny rano. Dradradradrain’ny minisitra tamin’ ny herintaona fony, nitambatra ny minisiteran’ ny Angovo sy ny rano ka nahateo ambany fahefany ny SAMVA, herintaona nisian’ny pesta izay, fa “ ilaina ny fahadiovana , tokony handray andraikitra amin’ izany ny rehetra”. Nefa ny rano amin’ izao dia tapaka, koa fahadiovana inona moa izany ity lazain’ny tompon’andraikitra ity. Saika mifoha amin’ ny iray ora maraina avokoa ny mponina mipetraka amin’ ny tanàna avo toerana, ary mameno siny. Rehefa tara kely, dia manomboka mandeha miadana ny rano. Tsy vitan’ ny fifohazana maraina ihany ny an’ireo mponina eny Soamanandrariny, Ambatomaro, Soavimbahoaka, Itaosy sns, fa dia voatery nanokana vola hafa ihany koa hividianana fitaovana fanangonan-drano. Mbola hendry ny olona tsy mitovy ny any Frantsa, ka tsy tokony hanaovana valy boraingina hoe tsentsina ny fantsona dia tsy tafakatra ny rano, ary tsy hita ny finiavana hitady vahaolana. Manoloana izao tsy fandraisana andraikitra izao, dia hanomboka hampiseho ny tsy fahafaliany amin’ ny alalan’ ny diabe ny mponin’Itaosy ny sabotsy izao.